“Horyaalka Premier League waa mid layaab leh xilli ciyaareedkan.” – Pep Guardiola – Gool FM
(Manchester) 04 Jan 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay guushii ay kooxdiisu ka gaartay naadiga Chelsea.
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guul weyn oo 1-3 ah kaga soo gaartay Chelsea, garoonkeeda Stamford Bridge, Sky blue ayaana soo bandhigtay qaab ciyaareed sarre kulankan.
Hadda tababaraha reer Spain ee Pep Guardiola ayaa kulanka kaddib la hadlay warbaahinta wuxuuna u sheegay:
“Natiijadu aan ku gaarnay Stamford Bridge waa mid aad u fiican, laakiin qaabka aan u ciyaarnay waxay aheyd mid aad u qurux badan, kuma guuleysan kartid koobab adigoon sidan u ciyaarin, waa guul muhiim ah oo aan Chelsea kaga gaarnay garoonkeeda.”
“Chelsea waa mid ka mid ah kooxaha ugu xoogan, waana ay dhibtoonayeen kulamadii ugu dambeeyay, laakiin waxaad arkeysaa tayada ciyaartoydooda iyo kuwa fadhiya kursiga keydka, waxaan laheen qorshe, waxaan isku daynay inaan u ciyaarno sidii aan horay u sameyn jirnay waana ku guuleysanay.”
“Ciyaartoyda way ku fiicnaayeen wax walba gaar ahaan marka ay heysteen kubadda, uma ciyaari karno sida kooxaha kale, waa inaan ku ciyaarnaa qaabkeena isla markaana aan weerar ku qaadnaa waqtiga saxda ah, waxaan ugu guuleysanay koobab qaabkan, waa inaan dulqaad badan yeelano.”
“Horyaalka Premier League waa wax lala yaabo wax walba xilli ciyaareedkan, wax walba waa la yaab, kaliya waa inaad diirada saartaa inta ay socdaan kulamada, waxaan rajeyneynaa inaan dagaallami karno lixda ama toddobada kulan ee soo socda.”
Muxuu ka yiri Frank Lampard guuldarradii ay Chelsea kala kulantay Manchester City??